Seho britanika 30 tsara indrindra amin'ny Amazon Prime 2021 - Fialam-Boly
Anontanio The Expert Celeb Style Fanamarihana Momba Ny Sarimihetsika Amboary Eo Noho Eo Fahalalana & Fanabeazana Asa Sy Vola Celeb Look Tsy Maintsy Jerena Ny Adin-Tsaina Fampihenan-Danja
Ny seho britanika 30 tsara indrindra amin'ny Amazon Prime, nanomboka tamin'ny 'Luther' ka hatramin'ny 'Downton Abbey'
Iray amin'ireo fomba tsara indrindra handaniana fotoana (ankoatry ny fianarana dihy TikTok, mazava ho azy) dia ny fahitana fahitalavitra mijery binge. Raha tsy mijery tsy menatra isika Ny birao fanindroany, dia angamba variana amin'ny fampisehoana vaovao mampiankin-doha isika Firefly Lane na WandaVision. Saingy ankehitriny, satria feno ny atiny amerikana maharesy lahatra izahay, dia mitady hanatsara ny filahantsika misy anaram-boninahitra iraisam-pirenena, na fampisehoana nahandro , sitkomika mahazatra na mampatahotra mistery famonoana olona .
Mazava ho azy fa nitanjozotra namakivaky ny Atlantika izahay mba hahita ny sasany amin'ireo seho britanika tsara indrindra amin'ny Amazon Prime dieny izao. Tantara fohy? Ny filahantsika dia efa nitombo avo roa heny ny halavany. Jereo 30 ny anaram-boninahitra anglisy mendrika indrindra, avy amin'ny Lotera ny Downton Abbey .
Mifandraika: 17 amin'ny fandaharana anglisy tsara indrindra amin'ny Netflix amin'izao fotoana izao
Miomàna hahita ny lafiny iray hafa amin'i Idris Elba amin'ity tantara an-tsehatra momba ny heloka bevava ara-tsaina ity. Ilay mpilalao britanika britanika dia milalao Detective Chief Inspector John Luther, izay miasa ao amin'ny Serious Crime Unit any London. Na dia fanta-daza amin'ny fanoloran-tenany aza izy, dia matetika no tototry ny raharaha i Lotera ary nanjary fatra-pananahana loatra, na dia hatramin'ny herisetra aza. BTW, ny anjara asan'i Elba dia nahazo azy ny Golden Globe Award, ny Screen Actors Guild Award ary EFATRA Fanendrena an'i Emmy.
Tian'i Sherlock Holmes? Avy eo fihaonana amin'ny mpitsongo vaovao tianao, Endeavor Morse (Shaun Evans). Napetraka nandritra ny taona 60 sy '70 tany Oxford, Angletera Inspecteur Morse ny spin-off dia manaraka ilay mpitsongo malaza ho toy ny rookie amin'ny fiandohan'ny asany. Ity andiany mahasarika ity dia azo antoka fa hitazona anao haminavina hatramin'ny farany.
Talohan'ny fifohazana malaza nataon'i Christopher Eccleston tamin'ny 2005 dia nisy ny kilalao Dokotera iza, izay nalefa voalohany tao amin'ny BBC tamin'ny 1963. Ny seho dia miompana amin'ny Time Lord tsy mitombina izay manomboka amin'ny adventures maromaro amin'ny fampiasana milina fangalarana. Miverina mitsangatsangana any amin'ny fiandohan'ny franchise malaza, izay i William Hartnell no kintana ho 'Doctor' voalohany.
ny fomba fampiasana menaka voanio ho an'ny fitomboan'ny volo
4. ‘Omens tsara’
Tsy mahagaga raha nahazo kintana dimy tao amin'ny Amazon Prime ity seho ity. Miorina amin'ny tantara nofinofin'i Terry Pratchett sy Neil Gaiman, mitovy tantana amin'ilay anjely Aziraphale (Michael Sheen) sy ny demonia Crowley (David Tendress), ity andian-tantara ity izay miara-miasa mba hisorohana ny fahatongavan'ny antikristy sy hiaro ny Tany amin'ny goavana loza.
5. 'Downton Abbey'
Tany am-piandohan'ny taonjato faha-20, ity tantara an-tsehatra manaraka ity dia manaraka ny Crawleys, fianakaviana aristokraty iray izay monina ao amin'ny tanin-tsandrim-bokin'i Yorkshire Downton Abbey. Raha manaraka ny andavanandrom-piainany izy ireo, dia mampiseho ny fiantraikan'ny hetsika ara-tantara lehibe koa, anisan'izany ny Ady Lehibe I sy ny filentehan'ny Titanic. Nahazo loka am-polony mahery ilay andian-tantara malaza, anisan'izany ny Golden Globe Award ho an'ny Miniseries tsara indrindra ary loka Emmy ho an'ny miniseries miavaka.
sarimihetsika romantika hol Hollywood
6. 'Gavin sy Stacey'
Ny mpiara-mamorona sy kintana James Corden dia fahafinaretana fotsiny amin'ity sitcom BBC ity, ary toy izany koa ireo mpiara-miasa aminy. Miorina amin'ny fifandraisan'i Gavin Shipman (Mathew Horne) amin'i Stacey Shipman (Pejy Joanna) ny seho, ary rehefa mandeha izany dia tafangona ny fianakavian'izy ireo (tena hafa). Mandritra izany fotoana izany, i Corden dia milalao ny kintana akaiky an'i Gavin, Smithy, ary i Ruth Jones kintana toa an'i Nessa Jenkins. Matokia anay rehefa milaza izahay fa ho raiki-pitia amin'ireo endri-tsoratra mampientanentana ireo.
7. 'The Royal Bodyguard'
Mety tsy nahagaga ny mpitsikera an'ity sitcom ity ny mpitsikera, fa ry zalahy, tena hampiala anao tsy an-kijanona izany. Ny Royal Bodyguard mitantara ny zava-niainan'ny kapiteny Guy Hubble (David Jason), mpiambina taloha izay lasa mpiambina Royal taorian'ny namonjeny ny ain'ny Mpanjakavavy tamin'ny asa sahisahy (na toa izany no niseho).
8. 'The Grand Tour'
Manana hatsikana anglisy, traikefa nahafinaritra ary hazakaza-tsoavaly fiara rehetra tiany indrindra. Miaraha amin'ny mpampiantrano Jeremy Clarkson, Richard Hammond ary James May rehefa manomboka ny diany manerantany izy ireo ary mivezivezy amin'ny fiara tsara tarehy manerantany.
Miorina amin'ny an'i James Runcie Ny misterin'ny Grantchester, Grantchester manaraka ny mpamaky vava anglikanina Sidney Chambers (James Norton), izay niforona ary tsy azo inoana fa iaraha-miasa amin'ny Detective Inspector Geordie Keating (Robson Green) mba hamahana ny famonoana olona. Ankoatra an'i Norton, i Tom Brittney dia niseho ho mpandimby ny toetrany, Will Davenport, taorian'ny fizarana efatra.
10. 'Mahagaga tanteraka'
Kintana Jennifer Saunders sy Joanna Lumley amin'ny maha Eddy Monsoon sy Patsy Stone, vehivavy roa misotro toaka izay maniry mafy ny hamerina ny fahatanorany sy hanatsara ny satan'izy ireo ara-tsosialy. Ny sitcom dia kintana ihany koa an'i June Whitfield ho renin-dry Eddy maneso, Jane Horrocks ho mpanampy tsy mahalala fomba ary Julia Sawalha ho zanakavavin'i Eddy.
11. 'Vavolombelona mangina'
Zava-misy mahafinaritra: Ity andiana heloka bevava mampihetsi-po ity dia naseho voalohany tamin'ny 1996, ary ankehitriny, 23 taona taty aoriana, noheverina ho tantara an-tsarimihetsika mpanao heloka bevava lava indrindra manerantany HATRANY . Ity ekipa ity dia manaraka ekipa manam-pahaizana momba ny patolojia siantifika rehefa manadihady heloka bevava tsy tambo isaina izy ireo, manomboka amin'ny famonoana olona ka hatrany amin'ny herisetra ara-batana.
Rehefa niverina nody i Ross Poldark taorian'ny niadiany tamin'ny Ady Tolom-piavotan'ny Amerikanina tamin'ny 1783, dia tsy noraisina tsara ny fandraisana azy. Hitan'i Ross fa rava ny tranony ary ny fitiavana ny fiainany dia mikasa ny hanambady ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy. Na eo aza izany, tapa-kevitra ny hanangana ny fiainany izy — ary mety hanana fotoana faharoa amin'ny fitiavana izy raha mbola eo.
Nahazo aingam-panahy avy amin'ny filalaonan'ny vehivavy iray an'i Phoebe Waller-Bridge tamin'ny taona 2013, ity hatsikana mainty ity dia mifantoka amin'ny 'Fleabag' (Waller-Bridge), tovovavy malala-tsaina iray izay mitolona amin'ny fahatezerana sy alahelo any London ankehitriny. Nahazo an'i Waller-Bridge ilay andiany enin- Emmy Awards ary loka British Television Academy ho an'ny fampisehoana hatsikana vehivavy tsara indrindra.
hihety volo vehivavy fomba anarana
Ao amin'ny Andraikitry ny adidy , Sergeant Detective Steve Arnott (Martin Compston) dia manamboninahitra mitam-piadiana nahazo alàlana izay nafindra tany amin'ny Vondrona miady amin'ny kolikoly rehefa nandika ny lalàna izy sy ny ekipany, ka niafara tamin'ny fahafatesan'ny sivily tsy manan-tsiny iray. Ilay andiany dia nahazo ny loka Royal Television Society Award ary loka Broadcasting Press Guild ho an'ny Andian-tsarimihetsika tsara indrindra.
NAMANA Nihaona Seinfeld amin'ity hatsikana anglisy mahatsikaiky ity, afa-tsy ny maha-lahy sy maha-vavy azy. Ny andiany dia mifantoka amin'ny fiainana tantaram-pitiavan'ireo namana enina (vehivavy telo sy lehilahy telo) eo am-piandohan'ny faha-30 taonany, ary tsy misy ny fotoana mahamenatra. Jack Davenport, Sarah Alexander ary Gina Bellman dia kintana amin'ity hatsikana tsy hay hadinoina ity.
16. 'The Durrells in Corfu'
The Durrells (fantatra koa amin'ny hoe Ny Durrells any Corfu ) dia tantara an-tsary mihomehy mifototra amin'ny zavatra niainan'ny mpanoratra sy mpandala ny natiora Gerald Durrell ny fiainam-piainany niaraka tamin'ny fianakaviany tao amin'ny nosy Greek Corfu. Taorian'ny fahafatesan'ny rainy dia manaraka ny reniny sy ny sisa amin'ny fianakaviana izahay rehefa sahirana amin'ny olana ara-bola sy mifanaraka amin'ny nosy.
17. 'Black Adder'
Kitiho ny tantaran'ny britanika sasany amin'ny fanarahana ny fitrandrahana zanakalahin'i Richard IV, Edmund Blackadder, ny Duke of Edinburgh (Rowan Atkinson). Tsara ny manamarika fa ny seho matetika dia laharana amin'ireo sitcom britanika tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra. Raha ny marina, tamin'ny taona 2000, ny British Film Institute dia nametraka ny andiany 16 tamin'ny lisitr'izy ireo tamin'ny fandaharana 100 Greatest British Television Programs.
18. 'Ianao, Izaho & Izy Ireo'
Na eo aza ny elanelan'ny faha-26 taonany, Laren (Eve Myles) sy Ed (Anthony Head) dia mifanelanelana. Saingy misy olana iray monja: Ny fianakavian'izy ireo dia tsy faly amin'izany. Mba haharatsy kokoa ny raharaha, ny vadin'i Ed, Lydia (Lindsay Duncan), dia niditra indray tamin'ny fiainany ary nanandrana nanangana korontana. Afaka mahatohitra ny tantara an-tsehatra rehetra ve ny tantaram-pitiavany?
Eritrereto Saturday Night Live , fa ny kinova anglisy. Ity andian-tantara an-tsarimihetsika sketch ity dia misy karazana endri-tsoratra mahatsikaiky sy parodies mahatsikaiky an'ny olo-malaza anglisy. Ary raha misavoritaka ianao amin'ny lohateny, Britain Little raha ny marina dia fanondroana marani-tsaina ilay teny hoe Little Englander, izay matetika ampiasaina hilazana ireo izay xenophobic na tery saina.
ahoana no ahafahantsika misoroka ny volo latsaka
20. 'James May: Oh Cook'
Ny toetran'ny fahitalavitra James May dia namintina ity seho ity tamin'ny andalana voalohany: Tsy afaka mahandro… Tongasoa eto amin'ny fampisehoana fandrahoan-tsakafo. Amin'ity andiany mampihomehy ity dia manandrana manomana lovia isan-karazany i May, manomboka amin'ny pasta matsiro ka hatrany amin'ny tsindrin-tsakafo. Ny valiny farany dia tsy dia tsara loatra, fa eo amin'ny lafiny mamirapiratra, dia hahatsapa ho tsara kokoa ianao amin'ny tsy fahombiazan'ny fahandroanao manokana.
21. ‘Ao anaty Claridge's ’
Tongasoa eto Claridge's, ilay trano fandraisam-bahiny misy kintana dimy misy trano any Mayfair, Londres. Amin'ity andiana fanadihadiana ity dia zahao ny any ambadiky ny sehatra ny fiasa anatiny amin'ity fananganana tsara ity, izay notsidihin'andriana sy olo-malaza maro.
22. ‘Tsy hadino’
Ireo tia zava-miafina mamono olona, ​​ho anao ity. Tsy hadino foiben'ny inspektera lehiben'ny Detective Cassie Stuart (Nicola Walker) sy Sunny Khan (Sanjeev Bhaskar), izay miara-miasa amin'ny ekipan'ny mpitsongo azy ireo hamaha ny raharaha famonoana olona sy olona tsy hita popoka. Ny andian-dahatsoratra dia tsy vitan'ny hoe mampiahiahy fotsiny, fa nahazo mpilalao mahay koa.
23. 'Herinandro ratsy indrindra amin'ny fiainako'
Howard Steel (Ben Miller) sy ny fofombadiny, Mel (Sarah Alexander), dia miomana hamatotra ny fatotra, fa izay mipoitra ao anatin'ny herinandro alohan'ny mariazin'izy ireo dia ny nofy ratsy indrindra ataon'ny mpivady. Toa manaraka an'i Howard na aiza na aiza alehany ny loza, manomboka amin'ny famonoana tsy nahy ny alikan'ny rafozambaviny ka hatramin'ny fahaverezan'ny peratra mariazy.
24. 'London Irish'
Ity sitcom ity dia manaraka an'i Bronagh Lynch (Sinead Keenan), Conor Lynch (Kerr Logan), Packy Kennedy (Peter Campion) ary Niamh Rafferty (Kat Reagan), namana akaiky efatra amin'ny faha-20 taonany, rehefa manandrana mitety ny fiainana any Londres. Raha tianao Sunny foana any Philadelphia , avy eo London Irish dia ho tonga eo ambonin'ny lalanao.
25. ‘Zoma hariva fisakafoanana hariva’
Nahazo aingam-panahy avy amin'ny fiaviana jiosy laika tsy miankina an'ny mpamorona Robert Popper, Sakafo hariva hariva manaraka ny Goodmans, fianakaviana jiosy ambadika kilasy antonony, satria manandrana ny hisakafoanana sabata amin'ny zoma alina. Mampalahelo fa izany fisakafoanana izany dia lavitra avy malama.
Azonao an-tsaina ve ny manomana sakafo manokana fitsingerenan'ny andro nahaterahana ho an'ny mpanjakavavy? Izany tokoa no nifaninanan'ny mpiadina tamin'ny vanim-potoana voalohany The Great British Menu. Omeo fahafinaretana ny tsironao amin'ity fampisehoana mahandro mahafinaritra ity satria ny chef britanika ambony dia mihazakazaka mitady fotoana hahandro sakafo iray amin'ny fety efatra.
27. 'The Inbetweeners'
Raha kapoaka diteo ny hatezerana sy ny tantara an-taonan'ny zatovo dia diniho Ireo mpifaninana , izay manaraka ny fiainan'i Will McKenzie (Simon Bird). Taorian'ny fisaraham-panambadian'ny ray aman-dreniny, dia nafindra tany amin'ny Rudge Park Comprehensive i Will, izay toerana fisakaizany tamin'i Simon Cooper (Joe Thomas), Neil Sutherland (Blake Harrison) ary i Jay Cartwright (James Buckley). Ny andiany dia miresaka lohahevitra lehibe vitsivitsy, toy ny fifamatorana lehilahy, firaisana ara-nofo ary ny fiainana an-tsekoly.
Miorina amin'ny tantara nosoratan'ny mpanoratra Inspector Alan Robo, Peter Robinson, dia nanara-dia an'i Inspecteur Chief Inspecteur antsoina hoe Alan Banks (Stephen Tompkinson) ny andian-tantara rehefa niara-niasa tamin'ireo mpanampy azy hamaha tranga famonoana olona tsy fantatra izy. Manantenà fihodinkodina be dia be izay hahatonga anao ho eo amoron'ny sezanao.
Hevitra fety fitsingerenan'ny andro nahaterahana faha-40
29. ‘Scande anglisy be mihitsy’
Ity tantara an-tsehatra mahatsikaiky ity dia tantara an-tsary ny tantara ratsy momba ny tena fiainana manodidina an'i Jeremy Thorpe nandritra ny taona 70. Miorina amin'ny bokin'i John Preston manana anarana mitovy amin'izany, ny andian-dahatsoratra anthology dia manome tsipiriany momba ny zava-nitranga talohan'ny tantara ratsy nifarana tamin'ny asa. Anisan'izany ny mpilalao Hugh Grant, Ben Whishaw ary Claire Foy.
30. ‘Ny hateviny’
Mandritra ny firesahana amin'ny BBC , Armando Iannucci, mpamorona ny seho, dia namaritra ny andian-tantara ho ' Eny Minisitra Nihaona Larry Sanders, 'manolotra ny fandanjalanjana tanteraka ny hatsikana sy ny zava-misy. Matetika ny fanesoana ara-politika dia miresaka ny fomba fiasan'ny governemanta britanika, ao anatin'izany ny olana iraisan'ny mpanao politika sy ny toeran'ny media.
Mifandraika: Mampiseho ny fahaizanao mandeha mivantana any Etazonia ny fahitalavitra BBC mendrika an'i Binge.
Sokajy Pets Indian Lakozia Maharitra
Fetin'ny reny kely ny fetin'ny reny
sarimihetsika tantaram-pitiavana anglisy
ny fomba hampihenana ny volo latsaka ao an-trano
narcos vs mamaky ratsy
sorohana ny fahaverezan'ny volo lahy lahy voajanahary